Laba nooc oo haweenka kamid ah iska ilaali haddii aad raadineysid xaas - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Laba nooc oo haweenka kamid ah iska ilaali haddii aad raadineysid xaas
Waxaa jiraan qaar kamid ah haweenka oo ku habboon guur halka ay sidoo kale jiraan kuwo aanan ku habbooneyn.
Waa kuwaan 2 nooc oo haweenka kamid ah oo la iska ilaaliyo haddii aad rabtid jacayl dhala guur.
Haweeney dhaqaale doon ah
Haweeneyda dhaqaale doonka ah waa mid kaa dalbata waxyaabo qaali ah si joogta ah. Waxa dhan ee ay dooneyso ayaa ah in qarashka kusoo gala ama aad shaqeysato inta ugu badan inay ku baxaan waxyaabaha qaaliga ah ee ay u baahantahay.
Xaqiiqada ayaa ah inaad ku shiidi doontid ama lacag la’aan aad ku noqon doontid bilaha ugu horeeya ee guurkaaga.
Haweeneyda dhaqaale doonka ah ma jirto wax ka quseeya mustaqbalkaaga oo ay ka fekereyso waxa kaliya ee ay ka fekereyso ayaa ah inay hesho dhaqaale iyo wax walba oo ay kaaga baahato, dhib malahan xaaladda adag ee aad kusoo shaqeysay.
Haweeneyda wareega badan
Haweenka waxgaradka ah waa kuwo jooga guryahooda oo howshooda qabsada intii ay aadi lahaayeen xaflad kasta, sida ay sameeyaan gabdho badan oo maanta jira.
Haddii aad dooraneysid gabar aad mustaqbal ka rabto, fadlan iska ilaali haweeney kadaba wareegta xafladaha iyo waxyaabaha malaa yacniga ah, sababtoo ah waxay dayacaysaa naftaada,caruurtaa iyo gurigaaga haweeney wareeg badan ma jirto meel ay ku wanaagsantahay, mana gasho mustaqbal.